ယိုဆဲ မော်ရင်ညို - ဝီကီပီးဒီးယား
GOIH ဟိုဆေး မော်ရီ ဒိုဆန်း ဆန်းတို့ မော်ရင်ညို ဖဲလစ် (ပေါ်တူဂီအသံထွက် [ʒuˈzɛ moˈɾiɲu]; ၁၉၆၃ ဇန်နဝါရီ ၂၆ တွင်မွေးဖွားသည်) သည် ပေါ်တူဂီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးမန်နေဂျာနှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး အသင်း၏လက်ရှိမန်နေဂျာ ဖြစ်သည်။ သူသည် အကြီးမားဆုံးသောမန်နေဂျာများထဲမှ တစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယူမှတ်ခံရပြီးနှင့်အစဉ်အဆက် ဆုဖလားများစွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သောမန်နေဂျာများထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ယိုဆဲ မော်ရိညိုကို ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် တွေ့ရပုံ
၁.၇၉ မီတာ (၅ပေ ၁၁လက်မခွဲ)
ပေါ်တူဂီဘောလုံးပိရမစ်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ် အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့သည့်နောက် မော်ရင်ညိုသည် Sporting CP နှင့် ပေါ်တို ရှိ ဆာ ဘော့ဘီ ရော့ဘ်ဆင်အတွက် စကားပြန်အဖြစ် ပထမဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ဘာစီလိုနာတွင် ရော့ဘ်ဆင်နှင့်သူ့ဆက်ခံသူ ဗန်ဟားလ်တို့၏လက်အောက်တွင် လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ။ ဘန်ဖီကာ နှင့်União de Leiria တို့တွင် မန်နေဂျာအဖြစ် ခဏတာအတွင်း အောင်မြင်ပြီးနောက် မော်ရင်ညိုသည် ၂၀၀၂ တွင်ပေါ်တူဂီသို့ မန်နေဂျာအဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည် Primeira Liga ကိုနှစ်ကြိမ်၊ Taça de Portugal, UEFA Cup နှင့် UEFA Champions League (၁၉၈၇ ခုနှစ်မှစ၍ ပေါ်တို၏ပထမဆုံးဥရောပဖလား ဖြစ်သည်)တို့ အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထိုအောင်မြင်မှုသည် သူ့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ချယ်လ်ဆီးနှင့်အင်္ဂလန်သို့ ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။ သူသည် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၂ ခု၊ အက်ဖ်အေဖလားနှင့်လိဂ်ဖလား ၂ ခုကို ၃ရာသီအတွင်း ရရှိခဲ့သည်။ ကလပ်ပိုင်ရှင် ရိုမန် အေဗရာမိုဗစ်နှင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုသတင်းများကြောင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ထွက်ခွာခဲ့သည်။
၂၀၀၈ တွင် မော်ရင်ညိုသည် အီတလီကလပ် အင်တာမီလန်သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပြီး သူ၏ပထမဆုံးရာသီတွင် စီးရီအေဆုဖလားကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင်သူသည် အင်တာမီလန်ကို စီးရီအေ၊ Coppa Italia နှင့် UEFA ချန်ပီယံလိဂ် သို့ ဖလား သုံးလုံးရအောင် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ (အီတလီကလပ်များအတွက် ပထမဦးဆုံး)။ ၎င်းသည် သူ့ကို ကလပ်နှစ်ခုဖြင့် ဥရောပဖလားအနိုင်ရခဲ့သည့် နည်းပြ ငါးဦး အနက်မှတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ကို ဖီဖာ၏တစ်နှစ်တာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြဆု ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် မော်ရင်ညိုသည် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူသည် လာလီဂါကို စံချိန်တင်မှတ်များဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ၄ နိုင်ငံတွင် လိဂ်ဆုများရရှိခဲ့သည့် ပဉ္စမနည်းပြ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် Copa del Rey နှင့် Supercopa de Espana တို့ကိုလည်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
မော်ရင်ညိုသည် ၂၀၁၃ တွင် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်မှ ချယ်လ်ဆီးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်တွင် သူသည်နောက်ထပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားနှင့်လိဂ်ဖလားကို ရရှိခဲ့သော်လည်း ရလဒ်မကောင်းသောကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် မော်ရင်ညိုသည် ပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွင် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ သူသည် ယူရိုပါလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားနှင့်အက်ဖ်အေကွန်မျူနတီဒိုင်းဆုဖလားများကို သူ၏ပထမဆုံးရာသီတွင်အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် သူသည် တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သူသည် ၂၀၁၅ တွင်ပေါ်တူဂီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FPF) မှ ရာစုနှစ်၏ပေါ်တူဂီနည်းပြအဖြစ် အမည်ပေးခြင်းခံရပြီးကစားသမားလွှဲပြောင်းမှုအတွက် ပေါင် ၁ ဘီလီယံကျော် သုံးစွဲခဲ့သည့်ပထမဆုံးနည်းပြဖြစ်သည်။ သူ၏နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောစရိုက်နှင့်သူ၏ပြိုင်ဘက်များကလှပသောဘောလုံးကစားခြင်းထက် ရလဒ်များရရှိခြင်းအပေါ်အလေးထားခြင်းကြောင့် သူသည် အာဂျင်တီးနားနည်းပြ Helenio Herreraဖြင့် လေးစားသူများနှင့်ဝေဖန်သူများက နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
↑ This list does not include job as coach-interpreter in Sporting CP, F.C. Porto and FC Barcelona, and deputy coach at FC Barcelona.
↑ Rank: Greatest all-time soccer managers – SportsNation – ESPN။ Espn.go.com (9 August 2013)။ 19 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Guardiola on his way to becoming the most successful coach of all time။ Marca (23 May 2019)။ 11 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mourinho makes shock Chelsea exit"၊ BBC Sport၊ 20 September 2007။ 24 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Harrold၊ Michael။ "2009/10: Inter back on top at last"၊ UEFA။ 15 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4September 2010။
↑ "José Mourinho's mission accomplished as Real Madrid seal title"၊ The Guardian။3May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Eric Gerets champion။ l'Equipe.fr။
↑ Jose Mourinho sacked as Chelsea manager။ BBC (17 December 2015)။ 17 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mourinho appointed United manager။ Manchester United (27 May 2016)။ 27 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mourinho becomes first manager to spend £1billion"၊7August 2017။
↑ Williams၊ Richard။ "In José Mourinho Inter finally haveatrue heir to Helenio Herrera"၊ The Guardian၊ 29 April 2010။
↑ Formica, Federico။ Helenio Herrera, or Josè Mourinho 40 years before။ SerieAddicted။ 19 May 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယိုဆဲ_မော်ရင်ညို&oldid=537665" မှ ရယူရန်
၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။